Ragga iyo Dumarka wax ku iibsiga khadka tooska ah | Martech Zone
Ayaa jecel fikradaha jinsiga? Waan sameeyaa… Waan sameeyaa… badanaa maxaa yeelay wax kasta oo ka hadlaya cirro, ragga buuran ee furiinka ah ee da'doodu tahay 40s waxay ku yaalaan qaab nololeedkayga. Anigu waxaan ahay ugaadhsade caadi ah markay timaado wax iibsiga… Waan doonayaa, waan helayaa, halkaas ayaan uga baxayaa. Baadhitaankaygu wuxuu bilaabmaa sida caadiga ah ka dib markaan furo sanduuqa oo aan ogaado inaan iibsaday wax aanan u baahnayn, rabin, ama fahmin. Waxaan ahay aabe keligiis ah oo la nool gabadh yar oo 19 jir ah, Katie, oo ah mid ka mid ah dukaameeyayaasha cajiibka ah ee aan abid arko. Gabi ahaanba kama dhaxlin caadooyinkeyga, marka waxaan dhihi doonaa waxay ku jirtaa hiddo-wadaha jinsiga.
Infograafigani ka yimid Dareen Bixinta halkan ka eeg… halkan waxaa ku yaal 6 natiijooyin muhiim ah oo ka soo baxay cilmi-baaristooda ku aaddan isbeddelada dukaameysiga ragga iyo dumarka
Dumar badan ayaa ragga ka iibsada khadka tooska ah
Haweenku waa ugaarsi gorgortan
Haweenku waxay aadaan alaabta gacanta lagu sameeyo iyo kuwa guridda
Farsamada wiilasha iyo kabaha gabdhaha? Mar kale ka fikir
Dumarka jecel barnaamijyada
Ma dooneysaa inaad ku dhiirrigeliso astaantaada dumarkaaga tirakoobkaaga? Soo gal baraha bulshada
Dabcan, waxaas oo dhami waxay taageerayaan ujeedadayda ah inay runti dumarka xukumaan adduunka!
Tags: ragdukaanka internetkaPinterestreddithaweenka
Maxay Haweenku U Yihiin Awoodda Dhabta ah ee Ka Dambeysa Baraha Bulshada